ပုစွန်နှင့် ရွှေဝါရောင် မွန်ငါး
မာရီယာ vazquez | 09/01/2022 10:00 | Pescado
ယနေ့တွင် သင့်အား ပြင်ဆင်ရန် Bezzia မှ ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ အလွန်ရိုးရှင်းသောငါးချက်ပြုတ်နည်း နောင်ပွဲများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ရွှေဝါရောင် မွန်ငါးပုဇွန်။ ပန်းကန်လုံးထဲ ပိုပြန့်သွားအောင် ဂုံး (သို့) ဂုံးအချို့ကိုလည်း ထည့်နိုင်သည် ။
El ပုစွန်နှင့် ရွှေဝါရောင် မွန်ငါး ၎င်းသည် ရိုးရှင်းသော ဟင်းချက်ရုံသာမက အမြန်၊ အလွန်မြန်ပါသည်။ ပြင်ဆင်ရန် မိနစ် 20 ထက် ပိုယူမည်မဟုတ်သောကြောင့် နံနက်ခင်းတွင် အခြားကိစ္စများကို အာရုံစိုက်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ မင်းအဲဒါကို မကြိုက်တော့ဘူးလား?
ဒီဟင်းကို မွန်ငါးနဲ့သာမက တခြားသူတွေနဲ့လည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ hake ကဲ့သို့ငါးအချိန်တွေကို ညှိပေးရုံပါပဲ။ Bezzia မှာ ဧည့်သည်တွေရှိတဲ့အခါ အဲဒါက အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဟင်းချက်နည်းကို သရုပ်ဖော်ဖို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ရမယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ဧည့်သည်တွေက တစ်ဝက်လောက်စားပြီးသွားပြီ။
ပုစွန် 20 ကောင်ကို အခွံခွာထားပါ။
minced2ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့်
ဝိုင် ၁/၂ ဖန်ခွက်
ငါးဟင်းရည်2ခွက် (ရဟန်းငါးခေါင်းနှင့် ပုစွန်အခွံတို့ဖြင့် ချက်စားနိုင်သည်)
ဒယ်အိုးနည်းနည်းနဲ့ ဆီပူအောင်တည်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူsauté တခဏ။
အရောင်ပြောင်းလာတဲ့အခါ၊ မုန့်ညက်ထည့်သွင်း ရောမွှေပြီး တစ်မိနစ်ခန့် ချက်ပြုတ်ပါ။
ထို့နောက် ဝိုင်ဖြူထည့်ပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် လျှော့ထားလိုက်ပါ။
ထိုအခါ ဟင်းရည်လောင်း ငါးနှင့် ရွှေဝါရောင်။ ရောမွှေပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ခန့် ချက်ပြုတ်ပါ။
ထို့နောက် အရသာရှိသော မွန်ငါးအသားလွှာများကို ထည့်ပါ။ အရေပြားကို အပေါ်ဘက်နှင့် လေးမိနစ်ခန့် ချက်ပြုတ်ပြီး အိုးခွက်ပန်းကန်ကို အခါအားလျော်စွာ မွှေပေးပါ။
လေးမိနစ်လောက်ကြာရင် rapa နဲ့ ခါးကိုလှန်ပေးပါ။ ပုဇွန်ကိုထည့်ပါ။. နောက်ထပ် ၂-၃ မိနစ်လောက် ချက်ပြီး cod al pil pil ကို ပြင်ဆင်နေသကဲ့သို့ အိုးကို ရွှေ့ပါ။
အပူကိုပိတ်ပြီး ပုဇွန်ပူပူနဲ့ ရွှေဝါရောင်အနှစ်ကို တည်ခင်းပေးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ချက်ပြုတ်နည်းများ » Pescado » ပုစွန်နှင့် ရွှေဝါရောင် မွန်ငါး
4 ခုနှစ်တွင် ရေပန်းစားခဲ့သော ပေါ့တ်ကာစ် 2021 ခုကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။